Gunyana. Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa | Zvazvino Zvinyorwa
Gunyana. Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Nyaya
Kusvika September zvakare. Mahoridhe anopera kana kutanga, asi zvishoma. Izvo zvisina kumira kuita kuverenga. Nemavonero ekupedzisira atove pedyo, Gunyana zvakare anounza makuru mazita e nhau dzekunyora. Izvi ndizvo kusarudzwa ye6 yavo pane mazita akadai se Perez-Reverte, Perez Gellida, Domingo Villar kana american Don unokunda. Asi vese vanovimbisa nyaya dzakanaka mumaonero zvakare. Isu tinotarisa.
1 Muturikiri - José Gil Romero naGoretty Irisarri
2 Dzimwe nyaya dzakazara - Domingo Villar
3 Zvimedu paganda - Cesar Pérez Gellida
4 Muapuro - Christian Berkel
5 MuItaly - Arturo Pérez-Reverte
6 Kusvira Guta - Don Winslow
Muturikiri - José Gil Romero naGoretty Irisarri
Yakanyorwa nemaoko mana naJose Gil Romero, anobva kuCanary Islands, naGoretti Irisarri, vekuGalicia, avo kwemakore angangosvika makumi matatu vanga vari vaviri vakasika muzvinyorwa nemumafirimu. Iye zvino vanopa ino novel inotitora isu pamberi pe musangano muHendaye pakati paFranco naAdolf Hitler. Ndipo patinosangana Elsa braumann, mukadzi wechidiki ChiGerman bhuku muturikiri uyo anogara kuMadrid muna 1940 achichengeta hanzvadzi yake.
Humwe husiku vakamudana kubva kuCaptaincy kuti a zvakavanzika basa zvine chekuita nemusangano uya pakati paFranco naHitler. Mumazuva iwayo, Elsa akatanga kuve nehukama naCaptain Bernal, mukuru wezve kuchengetedzwa kwekuvhiya, murume ane tsika uye mudiwa wemamuvhi saiye. Asi zvino mumwe munhu anotyisidzira Elsa kuti amubatanidze mune kupokana kushanda kwaunenge uine maminetsi matatu ekuba mamwe magwaro kubva kuna Franco muchitima kuenda kuHendaye.
Dzimwe nyaya dzakazara - Domingo Villar
Inoratidzwa ne linocuts naCarlos Baonza, Domingo Villar anosiya padivi, kwechinguvana, zvinyorwa zvake nezve muongorori Leo Caldas uye anotipa isu neichi kusarudzwa kwenyaya. Ndakave nerombo rakanaka kunzwa mumwe wavo mumusangano wekupedzisira naDomingo uyo wandakagona kuenda uye ndinorangarira kuti isu tese taivapo takazviona sei zvakanaka uye isu takamukumbira zvine simba kuti azvishambadze. Saka munyori weVigo akavabvisa mune yakasarudzika nzvimbo yaakange ainavo ndokuvaunza pamwechete mune iri basa.
Zvimedu paganda - César Pérez Gellida
Ivo vari kuitengesa seyakanakisa nganonyorwa naPérez Gellida, asi panguva ino munyori weValladolid haachadi kuratidza chero chinhu kuti ari pakati pemazita emunyika akanakisa mumhando nhema. Icho chokwadi ndechekuti izvozvi zvinotiunzira a chinonakidza chepfungwa nenyaya ye shamwari mbiri yevana vane chikwereti chakasarudzika uye vari mutaundi reUrueña
Mwanakomana Alvaro, munyori akabudirira, uye Mateo. Iwo maviri ari chikamu che macabre mutambo umo kutsiva kuchavatungamira kuti vatore sarudzo dzinochinja hupenyu hwavo kana mumwe wavo akakwanisa kupedza zuva iri.
Muti weApple - Christian Berkel
Zvakare inosvika imwe yenhau dzinonyanya kukosha kuGerman munguva dzichangopfuura uye akatotengesa anopfuura mazana mazana matatu nemakumi matatu emakopi akatengeswa uye akaturikirwa mumitauro misere.
Zvinotitora isu ku 1932 Berlin uye ndipo patinosangana Sala naOtto, vane gumi nematatu negumi nemanomwe pavanodanana. Iye anobva kuboka rinoshanda repasi pemhuri uye iye muJuda uye mwanasikana wemhuri yakasarudzika yemhuri. Asi nzira dzavo dzichapatsanuka apo muna 1938 Sala anofanirwa kubva kuGerman kunopotera kuParis uye Otto anoenda kumberi sachiremba weamburenzi.
A horo vanomutuka nekumuisa mu musasa wevasungwa muPyrenees, asi ipapo uchaita rombo rakanaka kuti ugone kuhwanda muchitima chakananga kuLeipzig. Ndichiri Otto achawira musungwa wevaRussia. Mushure mekunge Sala azopedzisira asvika pa Buenos Aires, asi, kunyangwe hazvo makore tisina kuonana, havazombokanganwi mumwe.
Iye weItaly - Arturo Pérez-Reverte
Nhasi uno zviremera zviviri, Perez-Reverte naDon Winslow, zvinowirirana mukutanga kwemabasa matsva. Yekutanga inopa ino novel, inotevera inotevera Mutsara wemoto, yakagadzirirwa muna 1942 na1943 uye yakafuridzirwa nezviitiko chaizvo. Inotaurira chikamu che hondo neusori zvakaitika panguva yechipiri Hondo Yenyika muGibraltar uye bay yeAlgeciras.
Ipapo Varwi veItaly vanorwisa vanga vachinyura nekukuvadza ngarava gumi nenhatu dzakabatana munzvimbo iyoyo. Elena Arbués, mutengesi wemabhuku ane makore makumi maviri nemanomwe, tsvaga mamwe mangwanani tichifamba pamahombekombe kune mumwe imwe yeaya akasiyana, akapfuura pakati pejecha nemvura. Nekumubatsira, iye haazive kuti kuita uku kuchachinja hupenyu hwake uye kuti rudo rwaachazonzwa kumurume uyu anongova mavambo enjodzi ine njodzi.
Kusvira guta - Don Winslow
Iro zita idzva reNorth America bestseller, Don Winslow, ichaitwa kuti imirire zvishoma. Tichine mukana wekupedzisira we Yaputswa gore rapfuura uye ikozvino rinopa izvi Kusvira guta, iyo inovimbisa kubudirira kutsva.
Tiri muna 1986 muna Providence, Rhode Island, uye ikoko anoshanda nesimba longshoremanman Danny Ryan. Iyewo murume murudo, shamwari yakanaka uye nguva nenguva anovaita mhasuru inoshanda kune avo vekubatana kwe irish mhosva iyo inodzora yakawanda yeguta. Asi Danny anoda kutanga kubva pakutanga kubva kuProvidence. Ndipo pazvinoonekwa mukadzi, Helen wemazuva ano weTroy, anozo tsamwisa a hondo pakati pemapoka anopikisana yeiyo mafia naDanny vachabatanidzwa mazviri vasingakwanise kuidzivirira. Uye uchafanirwa kuedza kuchengetedza mhuri yako, shamwari dzako, uye iyo chete imba yawakamboziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Gunyana. Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa
Chirahwe chekamuri 622